Sida loo Sifeeyo Tarjumaaddaada Suuqgeynta Kharash si looga Faa'iidaysto Kobcinta Ecommerce | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 11, 2020 Arbacada, Nofeembar 11, 2020 Douglas Karr
Ecommerce wuxuu ahaa isbeddel soo kordhay tobankii sano ee la soo dhaafay. Iyo safka faafa, dad badan ayaa wax ka iibsanaya khadka tooska ah abid abid. Ecommerce waxay bixisaa habka ugufiican ee lagu gaadho tirakoobka dadka aduunka oo idil lagana bilaabo kumbuyuutarka midig gadaashiisa. Hoos, waxaan eegeynaa muhiimadda ay leedahay tarjumaadda suuq geynta adeegyada iyo sida loogu isticmaalo si kor loogu qaado iibkaaga eCommerce.
Maxay U Bixineysaa U Adeegsiga Tarjumaadda Suuqgeynta Xirfad Leh Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Caalamiga ah
Adeegsiga adeeg turjumaad suuq-geyn xirfadeed ee howlahaaga eCommerce ayaa kuu kasban kara abaalmarino waaweyn. Ofer Tirosh, agaasimaha guud ee adeeg bixiyaha luqadda Tomedes, ayaa ku siinaya talo ku saabsan helitaanka shirkad xirfadle ah oo aad ka dhisto shirkaddaada istaraatijiyad suuq geyn caalami ah si loo ballaariyo:
Haddii aadan ku hadleynin luuqadda waddanka laga hadlayo, hel wakaalad hufan oo aad la shaqeyso - oo dhaqso u samee! Ku lug lahaanshaha wakaaladda meheraddaada caalamiga ah ee suuqgeynta bilowgii waxay wax weyn ka beddeli kartaa fursaddaada guusha. Haddii aad baareysid caadooyinka maxalliga ah, haddii aad raadineyso macluumaad ku saabsan farsamooyinka suuqgeynta la doorbido ee suuqa bartilmaameedkaaga, ama aad soo bandhigeyso macluumaad ku saabsan badeecadaada, inaad haysato qof gacanta ku haya oo si fiican ugu hadlaya luqadda waa muhiim. Turjubaan wanaagsan oo maamuli kara wax kasta oo ka imanaya macluumaadka suuq geynta ilaa adeegyada turjumaada websaydhka ayaa si dhakhso leh u noqon kara qayb aad u qiimo badan istaraatijiyad suuq geyn caalami ah.
Ofer Tirosh, agaasimaha guud ee shirkadda Tomedes
Ecommerce waa hubaal inay qarxeyso sanadkan, iyada oo dadka lagu qasbay inay wax ka iibsadaan khadka tooska ah halka dukaamada ay xiraan ama xoojiyaan kala fogaynta bulshada. Q2 2020, iibinta eCommerce ee Mareykanka, tusaale ahaan, booday ilaa 16.1%, ilaa 11.8% Q1.
Akhriso si aad u barato sida loo isticmaalo tarjumaadda suuq geynta si loo caawiyo kobcinta ganacsigaaga eCommerce.
Sida Loo Suuq Geeyo Goobtaada E-commerce Iyadoo La Isticmaalayo Tarjumaada Suuqgeynta
Tarjumida suuq geynta wuxuu daboolayaa noocyo badan oo suuq-geyn dijitaal ah oo kaa caawin kara inaad ereyga ugu gudbiso tirakoobka saxda ah ee ku saabsan boggaaga eCommerce. Iyadoo loo marayo tarjumaadda suuq geynta, waad hubin kartaa dadaalada suuq geynta dijitaalka ah ee soosocda inay dadka uga sii gudbiyaan bartaada eCommerce. Maxay yihiin tusaalooyinka tarjumaadda? Gaar ahaan macnaha guud, waxay ka mid yihiin:
Xayeysiisyada dhijitaalka ah, oo ay ku jiraan xayeysiiska muujinta iyo xayeysiiska warbaahinta bulshada
Xayeysiisyada suuq-geynta shirkado
Tarjumida suuq geynta sidoo kale waxay kaa caawin kartaa tarjumida qalabka suuqgeynta ee xayeysiinta dhaqameed haddii taasi ay tahay wax shirkadaadu u aragto inay mudan tahay inay maal gashato adiga diiradda saar istiraatiijiyadda suuqgeynta dadaal. Tarjumida suuq geynta xamili karaan xayeysiiska daabacaadda dhaqameed, buug-yaraha, waraaqaha iibka, xaashiyaha, buugaagta, iyo inbadan.
Suuqgeynta waxyaabaha ku jira waa hab kale oo loogu baahdo adiga tarjumaadda suuq geynta ku qarash gareeyaan kobaca ganacsiga. Si toos ah kor uguma qaaddo badeecad ama adeeg gaar ah. Taa baddalkeeda, waxay soo saartaa waxyaabo macluumaad ah ama madadaalo u leh tirada dadka ku habboon. Tusaale ahaan, bakhaarka sahayda xayawaanka ee 'eCommerce' ayaa laga yaabaa inuu soo saaro qoraallo qoraal ah oo ku saabsan hababka ugu wanaagsan ee lagu tababaro eey cusub.
Suuqgeynta waxyaabaha waxay dadka ka dhigeysaa inay ku lug yeeshaan astaanta waxayna ula hadlaan macaamiisha mustaqbalka qaab waxtar u leh iyaga. Suuqgeynta dhaqameed waxay dadka ka dooneysaa inay iibsadaan, taas oo fursad u siineysa in badan oo ka mid ah dadka maanta isticmaala internetka. Suuq geynta waxay noqon kartaa qayb adag oo ka mid ah istaraatijiyad suuq geyn caalami ah.
Haddii aad doorato inaad raacdo suuqgeynta waxyaabaha ku jira, adeegyada tarjumaaddu waxay hubin karaan in macluumaadkaaga waxtarka leh iyo kuwa madadaalada ah ay hayaan fariimahooda muhiimka ah isla markaana ay si dabiici ah ugu habboon yihiin luqadda iyo dhaqanka cusub
Tarjumaadda Suuqgeynta iyo Goobtaada Ganacsi
Tarjumida suuq geynta sidoo kale kaa caawin kara boggaaga eCommerce laftiisa. Hubinta in bartaada la tarjumay iyomaxalliga ahi waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatijiyad ganacsi oo caalami ah. Waa maxay tarjumaadda guud? Tarjumaadu waxay hubisaa in qoraalka laftiisu sifiican loogu akhriyey luqada cusub. Si kastaba ha noqotee, degmadu sidoo kale aad ayey muhiim ugu tahay waayo-aragnimada eCommerce. Deegaanka ayaa:
Cusboonaysii dhammaan astaamaha iyo qaabeynta bogga, sida calaamadaha lacagta, qaababka cinwaanka, iyo lambarrada taleefannada
Hubso in qaabeynta ay la jaanqaadayso macaamiisha maxalliga ah ee laga filayo iyo luqadda cusub
Cusboonaysii sawirada sida sawirada si aad ula mid dhigto heshiisyada dhaqameed ee deegaanka
Ka caawi goobta eCommerce inay iswaafajiso xeerarka maxalliga ah sida sharciyada asturnaanta ama ogeysiisyada cookie
Ka dhig waxyaabaha ku jira bogga laftiisa dhaqan ahaan xasaasi
wanaagsan A tarjumaadda suuq geynta adeegyadu waxay xamili karaan tarjumaadda, dejinta, iyo xitaa transcreation. Way soo bandhigi kartaa qoraalka iyo tarjumaadda ayaa fududeeyay loogu talagalay nuxurka fiidiyowga waxayna hubin kartaa in dhammaan nuqulku ay la jaan qaadayaan waxyaabaha laga filayo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Dhammaan faahfaahintani waxay isku daraan inay sameeyaan websaydh eCommerce xirfadle u eg. Waa wax caadi ah in la helo goob eCommerce ah oo si liidata loo tarjumay ama wali leh calaamado lacageed oo qaab shisheeye ah. Waxyaabahaas yar ayaa ka dhigaya websaydhka inay adag tahay in la isticmaalo oo waxay kaa dhigaysaa inaad la yaaban tahay haddii aad ku turunturoodeen goob been abuur ah. Hubso in waayo-aragnimada macaamiisha eCommerce waa mid wax ku ool u ah macaamiishaada oo leh degsiimayn degel ah. Degmadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kuwa ugu fiican xeeladaha suuqgeynta caalamiga ah.
Sida Loo Helo Adeegyada Tarjumida Suuqgeynta La Awoodi Karo
Hubso inaad ka dhex dukaamaysato hay'adaha turjumaadda ee kala duwan. Waxaad ku heli kartaa adiga oo weydiiya hareeraha shabakaddaada xirfadeed ama ka baarto khadka tooska ah.
Waxaad ku heli kartaa adeegyo maxalli ah adoo adeegsanaya ereyo sida adeegyada tarjumaadda ee aniga ii dhow, adeegyada tarjumaadda xirfadeed ee UK ama wakaaladda tarjumaadda London. Waxaad sidoo kale ku raadin kartaa adeegga luuqadda aad u baahan tahay, adoo adeegsanaya ereyo sida tarjumaadda suuq geynta Isbaanish, tarjumaadda suuq geynta Shiineys ah, ama tarjumaadda suuq geynta af faransiis.
Hubso inaad u diyaariso liis su'aalo ah adeeg kasta. Sida xiriirkaagu uga jawaabayo su'aalahaas ayaa kuu sheegi doona aqoonta ay u leeyihiin iyo sida shakhsiyadeed ee ay ula xiriiraan. Waad weydiin kartaa wax ku saabsan qiimeynta, sida ay u abaabulaan si ay ugu sii sugnaadaan waqtiga kama dambaysta ah, waxa ay yihiin shahaadooyinkooda turjumaan, iyo waxa ay khibrada u leeyihiin tarjumaadda suuq geynta waa.
Tags: tarjumaadda ecommerceganacsiga caalamigaganacsiga caalamiga ahcaalamitarjumaadda suuq geyntaLuqado badanxabaalqoraalkatarjumaadda qoraalkatarjumaadaadeegyada tarjumaadda
6 Talaabo oo laguhelayo Platform Data Platform (CDP) Iibsasho C-Suite-kaaga